‘राज्यले नभूलोस् वैदेशिक रोजगारको खाँचो’ ||
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर ११७ नेपालीको मृत्यु ||
राहत माग्ने घरबेटी
चैत महिना लागेसँगै काठमाडौंमा एक प्रकारको सन्नाटा छाइसकेको थियो । त्यसमा पनि सरकारले पहिलो हप्ताभित्र माध्यमिक तहको परीक्षा सक्न जारी गरेको उर्दीले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै जाने संकेत गरिसकेको थियो । गत वर्षको डिसेम्बरबाट चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोनाका संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएका थिए । मृतकको संख्या र विभिन्न देशमा फैलिँदै गएको महामारीका समाचारले जो कोही नेपाली अतालिन थालेका थिए । केही समयअघि मात्र चीनको वुहानबाट १५९ जना विद्यार्थीको उद्धार गरेर सरकारले भक्तपुरको खरीपाटीमा ल्याएर क्वारेन्टाइमा राखेको थियो । कोरोनाको महामारी फैलिएपछि चीनको वुहानमा लकडाउन गरेसँगै बन्दान्दीमा परेका नेपालीलाई सरकारले ढिलोगरी नेपाल फर्काएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार च्यानलहरुमा दैनिक कोरोनाका बिरामी, नयाँ संक्रमति र मृतकको समाचार हेर्दा हेर्दा नेपालीहरु पनि त्रसित हुनु स्वभाविक थियो । अचानक सरकारले चैतको पहिलो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पनि सुरु भयो कोरोनाको त्रास । दिनहरु बित्दै गए । टेलिभिजन च्यानलहरुमा हरेक दिन काठमाडौं उपत्यका छोडेर घर जानेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताउन थाले । सरकारले पनि चैत नौ गतेसम्म काठमाडौंबाट १० लाखभन्दा बढीलाई आ–आफ्नो घर फर्काउने प्रोत्साहन गरिरहेको थियो । अधिकांशले आफ्ना व्यापार व्यवसाय बन्द गराएर भएपनि उपत्यका छाडे । सायद केही दिनका लागि मात्र होला भन्दै उनीहरु बालबच्चा च्यापेर पुख्र्याैली थलोमा फर्किए ।
सरकारले अचानक चैत १० गते बेलुका एक साताका लागि लकडाउनको घोषणा ग¥यो । अत्यावश्यक सेवा प्रदायकबाहेक अन्यलाई हिडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले लकडाउनको घोषणा ग¥यो । यो एक प्रकारको कर्फ्यूजस्तै नै हो । घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने सरकारको निर्णयसँगै नेपालमा कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिहरु फेला परेका समाचार पनि दिनहुँ आइरहेका थिए । लकडाउन भएसँगै पश्चिम नेपालका विभिन्न नाकामा भारतमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरु फर्कन नपाएको र सीमामा अलपत्र परेका समाचारहरु आइरहेका थिए । यता नेपाल सरकारले तीन नेपाली स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा उनीहरु आफ्नो देशमा आउन पनि शासकको आदेश कुरीरहेका थिए । एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राश थियो भने अर्कोतिर उनीहरुलाई घर फर्किए परिवारसँग समय बिताउने तीव्र इच्छा ।
सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरु आ–आफ्नो घर फर्किएसँगै एक प्रकारको संशय फैलियो । उनीहरुमध्ये केही कोरोना संक्रमित भएका समाचार आएसँगै पश्चिम नेपालका स्थानीय झन् त्रसित भएका छन् । तर सरकारले ती क्षेत्रमा पर्याप्त चेकजाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरु अझै निर्वाध रुपमा हिडडुल गरिरहेका मात्र छैनन् यदि संक्रमित भए अरुलाई पनि कोरोनाको संक्रमण फैलाइरहेका छन् । एक साताको लकडाउनको समय बित्न नपाउँदै दैनिक काम गर्न नपाएर भोकै बस्नु परेका बिपन्न, ज्यालादारी र मजुदरलाई खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सर्वत्र आवाज उठ्न थालेपछि देशभर राहत र सहयोगका कुरा आउन थाले । विभिन्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउनले समस्यामा परेकाहरुलाई राहत वितरण गर्न थाल्यो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने योजना बनाउनु स्वभाबिक हो । अन्य बेलामा जस्तो खाद्यान्न र तरकारी पसलहरु यति बेला खुलेका छैनन् । सरकारले नै धेरै जना भीडभाड नगर्नु भनेकाले सबै मानिस बाहिरका मासिनसँगको हिमचिममा छैनन् ।
सरकारले घरधनीलाई समस्या परेको बेला तीन महिनाको घर भाडा छुट दिन आग्रह गरेका समाचार आइरहेका छन् । त्यतिमात्र नभई बैंकको किस्ता तिर्न वा बिजुलीको बील तिर्न हतार नगरेपनि बिलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । घर बाहिर जान नपाएपछि सबैजसो मानिस घरमै छन् यति बेला । १५ दिनदेखि घरबाहिर जान नपाउँदा पट्यार लाग्नु पनि स्वभाविक हो । त्यसैले घरधनीहरु आफ्ना घरका छत छतमा बसेर राहत पाउनुपर्ने बहस गरिरहेका छन् । सरकारले दिने सबै प्रकारका छुट आफूहरुले पाउनुपर्ने बहस गरिरहँदा त्यही घरमा भाडामा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी वा अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थामा काम गर्नेलाई घरबाट निकाल्नेसम्मका धम्की घरधनीले दिन थालेका छन् । जथाभावी घर बाहिर गएकाले संक्रमण सार्ने डरले अधिकांश घरधनीले यतिबेला कोठामा बस्नेहरुसँग बोल्न समेत हिचकिचाइरहेका छन् ।
मुलुकमा आपत परेका बेला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो । समस्यामा परेका बेला सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्छ । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । तर हामी आफ्नो अधिकार मात्र खोज्छौं ं। जब जिम्मेवारीको कुरा आउँछ तब नेपाली पछि हट्छन् । कोरोनाको त्रास फैलिएको यो समयमा देशभरका अधिकांश घरधनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेका छन् । अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबाट निकाल्ने र समस्याको बेलामा आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न कति पनि हिचकिचाहट छैन तिनीहरुलाई । सरकारले दिने राहत चाहिने घरधनीले आफ्नो घरमा भाडामा बसेको मानिसलाई एक महिनाको घर भाडा छुट दिन आनाकानी गरेका छन् । आफ्नो मात्र समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट पछि हट्दा तिनीहरुलाई राज्यले छुट दिन जरुरी छैन । वर्षौदेखि घर भाडामा लगाएपनि थारै भएपनि घरबहाल कर समेत तिर्न नजाने घरधनी आपतका बेलामा सरकारले दिएका सबै छुटको उपयोग गर्न अग्रसर छन् । तर अरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरु पिठ्यू फर्काएर बसेका छन् । त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा घर धनीहरुको विरोध मात्र भएको छैन । उनीहरुको प्रतिक्रिया र गतिविधिका ट्रोलहरु पनि बन्न थालेका छन् । गलामा सुनको सिक्री लगाएर हातमा आइफोन बोक्दै पाँचकिलो चामल–दाल र एक डल्लो साबुन लिन लाइनमा बसेका छन् घरधनीहरु । जो राज्यले दिने सुविधा हामीले चाँहि किन नपाउने भन्दै लबस्तरो प्रश्न ते¥याएर राहतका पोका बोक्दैछन् । लकडाउनका बेलामा आफ्नो टोल छिमेकमा कुन संस्थाले के राहत वितरण गर्न आउँछ भन्ने आशमा बसेका घरधनीहरु एक मुठा साग सहयोग लिन पनि पछि पर्दैनन् ।
कोरोनामा ध्यान नपुगेको अपांगता विपद् व्यवस्थापन
सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा १.९५५ अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् भनिरहँदा प्रमाणित भएका र प्रमाणित हुन वाँकि विभिन्न खालको प्रकोप, विपद्, घटना, दुर्घटनाबाट भएको क्षति र मानवमा परेको असरले गर्दा जनसंख्याको १०५ मा अपांगता रहेको छ भन्ने गरिन्छ । जुन ३० लाखको हाराहारीमा हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू सधैँ नै संकटको अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरूको विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच एकदम न्युन हुन्छ भने गरिबी र अपांगता एक अर्कासँग जोडिएको हुन्छ । अपांगता भएका महिला, बालबालिका, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको नेपालमा अवस्था झनै दयनीय छ ।
नेपालमा अहिले कोभिड १९ जस्तो महामारीको अवस्थामा के अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारले सही सूचना पाइरहेका छन् ? के अपांगता भएकाहरूले दैनिक उपभोगका सामान सहज रूपमा पाइरहेका छन् ? के औषधि र अन्य अत्यावश्यक सहायक सामग्री सहज छ ?
अहिलेको अवस्थामा माथि उल्लेखित कुराहरू सहज छैन । न दैनिक उपभोगका सामान सहज छ न त औषधि र सहायक सामग्री नै न त सूचना नै पहुँचयुक्त छ । यसको मुख्य कारणमा हाम्रो सामाजिक संरचना र अपांगता भएका व्यक्तिहरू हेर्ने दृष्टि नै हो । अपांगता भएका व्यक्तिको अपांगता अनुसार नै छुट्टाछुट्टै आवश्यकता हुने गर्दछ । सबै खाले अपांगतालाई एउटै रूपमा हेर्नुहुँदैन । अझ विपद्को बेला विशेष हेरचाह र सहयोग जरुरी हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची ले अपांगताको परिभाषा तथा अपांगताका प्रकारहरूको यसरी परिभाषित गरेको छ यसबाट विभिन्न खालको अपांगता र उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न मद्दत गर्छ ।
शारिरीक अंग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा अपांगता भएका व्यक्ति
१. शारिरीक अपांगताः स्नायु, मासंपेशी र जोर्नी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हिँडडुलमा समस्या (जस्तैः बाल पक्षघात (पोलियो), शारीरिक अङ्गबिहीन, कुष्ठ प्रभाव, मांसपेशी विचलन (मस्कुलर डिस्ट्रोफी), जोर्नी र मेरूदण्ड सम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लवफीट पैँताला फर्केको, रिकेट्स हड्डी सम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता) तथा सोह्र वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेर बमोजिम हुनुपर्ने औसत उचाइभन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको व्यक्ति ।
२. दृष्टि सम्वन्धी अपांगताः दृष्टि सम्बन्धी देहायको समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान नहुने,
(क) दृष्टिविहीनताः औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि दुवै आँखाले हातको औँला दश फिटको दूरीबाट छुट्टाउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको पहिलो लाइनको अक्षर (३र६०) मा पढ्न नसक्ने व्यक्ति ।
(ख) न्यून दृष्टियुक्तः औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि बीस फिटको दूरीबाट हातको औंला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर (६र१८) मा पढ्न नसक्ने ।
(ग) पूर्ण दृष्टिविहीनः पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति ।
३. सुनाईसम्बन्धी अपांगतास् सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतारचढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति
(क) बहिराः असी डेसिवलभन्दा माथिको ध्वनि सुन्न
नसक्ने वा सञ्चारका लागि साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति ।
(ख) सुस्तश्रवणः सुन्नलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा पैँसठीदेखि असी डेसिवलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्ति ।
४. श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताः सुनाइ सम्बन्धी र दृष्टिसम्बन्धी दुवै अपांगता भएको वा दुईवटा इन्द्रिय सम्बन्धी अपांगताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको व्यक्ति ।
५. श्वर र बोलाइ सम्वन्धी अपांगताः श्वर र बोलाइ सम्वन्धी अङ्गमा उत्पन्न कार्यगत सीमितताका कारण तथा बोल्दा स्वरको उतार चढाबमा कठिनाइ, बोली स्पष्ट नहुने, बोल्दा शव्द वा अक्षर दोहोर्याउने व्यक्ति ।
६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगताः मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति ।
७. बौद्धिक अपांगताः उमेरको वृद्धिसँगै वौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तोः डाउन्स सिन्ड्रोम समेत)
८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपांगताः अनुवंशीय असरका कारण रगतमा हुने फ्याक्टरमा विचलन आई रगत जम्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थाको व्यक्ति ।
९. अटिजमसम्बन्धी अपांगताः जन्मजात नशा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तोः सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम वुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाई हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोर्‍यारहनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्ति)
१०. बहुअपांगताः एउटै व्यक्तिमा माथि उल्लिखित दुई वा दुईभन्दा वढी प्रकारका अपांगताको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तैः मस्तिष्क पक्षघात आदि)
माथी उल्लेखित अपांगताको वर्गीकरणबाट हामीले के थाह पाउन सक्छौं भने अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारलाई विपदको बेलामा अरुलाई भन्दा धेरै नै असर गर्छ । अझ अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपांगताको वर्गीकरण गरिएको छ ।
(१) पूर्ण अशक्त अपांगताः आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रूपमा अरुको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्ति ।
(२) अतिअशक्त अपांगताः वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रूपमा अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
(३) मध्यम अपांगताः भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरुको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
(४) सामान्य अपांगताः सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूले के वुझनु पर्ने जरुरी देखिन्छ भने अहिलेको परिस्थतिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू पूर्ण जोखिममा रहेका छन् । उनीहरूमा चेतनाको कमि त छँदै छ त्यसमा भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अपांगता भएका व्यक्तिहरू मा कुनै पनि मिल्दो जुल्दो लक्षण देखियो भने पनि त्यसाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने सक्ने अवस्था धेरै नै कम छ ।
अपांगता समावेसी विपद् व्यवस्थापन कस्ले सहयोग गर्न सक्छ त ?
पहिलो सहयोगी परिवारका सदस्यहरू हुन् । विषेश पूर्ण अशक्त अपांगता र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकमा आमा, बाबु वा प्रत्यक्षरूपमा पालनपोषणमा संलग्न व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यहरूले जाने अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको ठूलो भूमिका छ । स्थानीय तहले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक पहिलेदेखि नै रहेको छ भने के–के आवश्यक छ त्यस्को जोहो गर्नै । स्थानीय स्वास्थ संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायसँग मिलेर जोखिमको प्रकृतिका साथै त्यसको स्तर वा मात्रा निर्धारण गर्ने । अपांगता भएका व्यक्तिहरू र परिवारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री र औषधिहरूको अवस्था बुझने, अभाव भएमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने । लकडाउन पछिको उनिहरूको स्थिति झन् कठिन हुन सक्नेछ ।
मुलुक अहिले विश्वका अरु देश झै लकडाउनको सामना गरिहेको छ । देशका सडकहरु सुनसान र भूत शहरमा परिणत भएका छन् । मानिस वाच्नका लागि केहि बोरा चामल र सिलिन्डर ग्यास जम्मा गरेर मात्र पनि सुरक्षित हुन खोजिरहेको छ । अरु बेला सामान्य लाग्ने ट्वाइलेटपेपर, स्यानिटाइजर जस्ता वस्तुको चाजोपाजो मिलाउन प्रहरी र प्रशासन युद्ध स्तरमा लागिरहेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक कामवाहेक घर वाहिर ननिस्कने लगायत १५–१६ वुँदे उर्दी जारि गरिसकेको छ । यो महामारीले मानव जगतलाई नै एक खालको गतिहिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । आज पंक्षीहरु निर्वाद ढंगले आकासमा उडिरहेका छन् । पृथ्वीमा कमिलाहरु दौडीरहेका छन् । तर मानव जाति मात्र आज घरभित्रै बसेको छ । उनीहरु घरको कोठाभित्रै कोचिएर बस्न बाध्य छन् ।
आज अरबौ मानिसको निन्द्रा हराएको छ । कोरोना भाइरसको माहामारीले मानव जातिकै अत्यन्त खराब शत्रुका रुपमा उपस्थित छ – यो भाइरस । अन्य कुनै कारण नभएर कोरोना मानव सिर्जित महाभारी हो । एउटा प्रतिवेदन अनुसार, जनवारबाट मान्छेमा सर्ने सरुवा रोगका कारण संसारमा वर्षेनी १० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । ‘प्लस वान’ जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार सन १९८० देखि २०१३ सम्म विश्वमा २१५ वटा महामारी फैलिएका थिए । जसले विश्वभर साढे ४ करोड मानिसलाई संक्रमित बनाएको थियो । ती मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी रोगहरुको उत्पत्ति स्रोत जनावर थिए र जसमध्ये दुई तिहाई रोगहरु जंगली जनावरमा पाइने व्याक्टेरिया, भाइरस लगायतका जीवाणुका कारण मानिसमा सरेका थिए । मानिसका अनौठा सोख र उपभोगका कारण वन्यजन्तुसँग मानिसको वढ्दो हिमचिम र वनविनाश लगायतका वन्यजन्तुको वासस्थानमा आएको ह्रासका साथै जलवायु र मौसम परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुबाट मानिसमा रोग सर्ने वातावरण वनिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्व आर्थिक र राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन ( विश्वब्यापीकरण ) को उपज हो । अस्वस्थ पुँजीवादले ल्याएको महत्वपूर्ण संकट उपभोगवादी चरित्र हो । यसले पछिल्लो समयमा पुँजीको चरित्रलाई अधिकतम रुपले उपभोगवादी बनाइदिएको छ । उपभोगवादी चरित्रले मानवीय जीवनका मूल्य , मान्यता, आदर्श सस्कार सबैलाई ध्वष्त पार्दै मान्छेलाई खेलौना बनाइदिएको छ । अतिरिक्त आय आर्जन र उपभोगका लागि मानव जातिले गर्दै आएका अस्वस्थ पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाले यस प्रकारका सङ्कट निम्त्याउँदै छ । सौखीनहरुले संसार बनाउने भन्दा पनि विगार्ने काम गरेका छन् । एड्स अप्राकृतिक यौन सम्पर्कको परिणाम हो । यो रोगले संसारका लाखौ मानिसको ज्यान लिएको छ ।तर पनि पुँजीवादी विश्वबजारमा यौन पैसाको लागि नाफामूलक व्यापार भएको छ । उपभोक्तावाद ग्लोवलाइजेशनको चरम अभिव्यक्ति हो । आजको सङ्कट ग्लोभलाइजेशनको परिणाम हो । प्रकृतिमाथिको अतिक्रमण र आक्रमणबाट उत्पन्न महामारी हो ।
पुँजीवाद आफ्नो नाफा बढाउनको लागि कुनै मान्यता र आवश्यकता विना तथा सामाजिक फाइदाको मतलब नगरिकनै अराजकतावादी उत्पादनमा लाग्छ । यसले आफ्नो उत्पादन बढाउदै जान्छ । सम्पूर्ण नाफा केहि पुँजीवादी कम्पनीसँग मात्र केन्द्रित हुन्छ । कामदारहरु आफ्नो उपभोगका लागि नभएर मालिककालागि उत्पादन गर्छन । जब कुनै पनि वस्तुको उत्पादन प्राकृतिक हिसाबले नभई अप्राकृतिक हिसाबले हुन्छ , त्यस्ता उत्पादन वढी त हुन्छ तर ति विषाक्त हुन्छन् र मानव स्वस्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने खालका हुन्छन् । त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्दा मानिसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । अनि विभिन्न भाइरसले आक्रमण गर्दछ । कोभिड- १९ ( कोरोना भाइरस ) माहामारी यसैको उपज हो ।
आज विश्वमै कृषि उत्पादन वढाउन प्रयोग हुने रोग किरानाशक, कीटनाशक, झारनाशक, ढुसीनाशक गरी मुख्यतः चार प्रकारका औषधी प्रयोग गरिएको छ । विश्व पर्यावरण प्रतिवेदन २०१९ अनुसार संसार भरी गत वर्ष २५ लाख ५० हजार टन विषादी खेतीबारीमा प्रयोग भएको छ । तर डरलाग्दो तथ्य के छ भने यसरी रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने विषादीमध्ये ९८ प्रतिशतले हावा, पानी र माटो प्रदुषित गर्छन । ६ ठूला कम्पनीले संसारको ७५ प्रतिशत विषादी उत्पादन गर्छन । खाना मानव जीवनको अपरिहार्य तत्व हो । जसविना मानव जीवनको अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिदैन यो स्वच्छ र मिसावट रहित नभए हाम्रो शरीरमा अनेक समस्या देखा पर्छन । यसै सन्दर्भमा एउटा मननीय भनाई समेत छ– खानालाई औषधिका रुपमा सेवन गर, अन्यथा औषधि नै खानका रुपमा खानु पर्छ । तर अहिले खाइरहेको वस्तुले हामीलाई हित गरिरहेको छ कि हानी ? पक्कै पनि हामीलाई ती वस्तुले हानी गरिरहेको छ । जब हामी त्यस्ता वस्तु सेवन गछौं हामी सामान्य रोगसँग लड्ने क्षमता गुमाउछौं । अस्वस्थ पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाले मानिसहरुको स्वास्थ्य विगारेर औषधि उत्पादन गरी त्यसलाई बिक्री गरेर थप धन कमाउने योजना बनाउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी संकटकालको घोषणा गरेको छ । अहिले धन र शक्तिले काम गरिरहेको छैन । औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा आफुलाई अव्वल ठान्ने अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरुलाई पराजित गरेको छ - कोरोना भाइरसले । आज कोरोना भाइरसको प्रकोप अघि अघि छ भने विज्ञान पछी पछी छ । अनेक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म यो भाइरसको प्रतिरोधि भ्याक्सीन पत्ता लाग्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसको वंश पत्ता लागेको छैन । स्टेफन हकिन्सले जीवनको अन्तिम क्षणमा वंश परिवर्तन गरेका नयाँ जीवाणुले विश्व मानव जातिको संहार गर्न सक्छ भन्ने कुरा अनुमान गरेका थिए । त्यो सत्य सावित हुँदै छ कि ? यसले कतिको ज्यान लिन्छ यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
नेकपा नेता दिननाथ शर्माका केहि विचारहरुलाई सापटी लिदै भन्नु पर्दा मानव जातिको रक्षा मानवताको एकताभित्र मात्रै सम्भव छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘विगत इतिहासको लामो कालखण्डमा धेरै धर्म युद्धहरु भए । नरसंहारका औजार बने । सबै धर्महरुमा अहिले पनि तिनीहरुका वाछिटा देखिदैछ । धार्मिक प्रतिद्धन्दिताले मानव जातिको रक्षा गर्न सम्भाव छैन । रोमवासीको जीवनरक्षाका लागि पोपले गरेको प्रार्थना सुनेको छैन, कोरोना भाइरसले । यशु, अल्लाह र ईश्वरबाट रक्षा हुन सम्भाव छैन आधुनिक विश्वको । यो केवल आस्था मात्रै हो । भौतिक नियमको पालना नगर्दाको परिणाम हो । प्रकृतितिर फर्केर क्षमा माग्नु पर्छ । उपभोक्तावादले विश्वास गर्नु पर्छ प्रकृतिलाई । कोभिड–१९ जस्ता महामारीलाई सामना गर्ने उपचार विधि पनि प्रकृतिकै गर्भमा छ भन्ने विर्सनु हुन्न ।’
बन्दुक र वैमवको आडमा विश्व महाशक्ति बनेका देशहरुको दम्भ कोरोनासँग चकनाचुर भएको छ । विश्वमा मानिस अहिले बाँच्नकै लागि एक किसिमले युद्ध लडिरहेका छन् । तर यो युद्ध देश देशबीच वा मानिस मानिसबीच नभै मानिस र प्रकृतिबीचको हो । आफुमात्र बाँच्ने स्वार्थले प्रेरित मानिसले प्रकृतिको अतिदोहन गरेको र प्रकृतिका अन्य जीवका लागि बाँच्ने अवसर बिगार्दै गएकाले प्रकृति अहिले मानव भन्ने जातिलाई नै डाइनोसर बनाउने सुरमा छ कि भन्ने बुझाई पनि कतिपय चिन्तकहरुको छ ।
अन्त्यमा, मानवशास्त्री डा.मेरी डेसेनले भने जस्तै जब सिँगो पर्यावरणीय प्रणाली स्वस्थ हुन्छ अनि मात्रै मानिस र मानव समाज स्वस्थ हुन सक्छ । प्रकृतिको समृद्धिसँग हाम्रो समृद्धि जोडिएको छ । पश्चिमा पुँजीवादको विचारभन्दा फरक प्रकृतिको सुक्ष्म जीवसम्म जोगाउने फरक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ । हामी प्रकृतिका उपज र अंग हौं । हामी प्रकृतिभन्दा माथि पनि होइन र वाहिर पनि होइन । आज हामीलाई अस्वस्थ पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था होइन प्रकृतिलाई पनि माया गर्ने समाज व्यवस्था चाहिएको छ । त्यो हो पर्यावरणीय समाजवाद जब हामी पर्यावरणीय समाजवाद अगाल्छौं तब यस्ता माहामारीले विश्वलाई छुन सक्दैन ।
कोरोना अर्थतन्त्र, विश्व सञ्चार र नेपाल
बुधबार (अप्रिल १) सम्म विश्वभर ८ लाख ६१ हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । त्यसमध्ये एकब लाख ६७ हजार निको भइसकेका छन् र ४२ हजार ५ सय जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा प्रायः सबै ज्येष्ठ नागरिक र मुटु फोक्सोलगायत अन्य रोगबाट पहिलेदेखि पीडित छन् । यसअघि फैलिएका सार्स, बल्र्डफ्लु, स्वाइनफ्लु, इबोला, जिका भाइरसको तुलनामा यो कमजोर भाइरस हो । यस्ता भाइरसहरूको प्रभाव चार–पाँच महिनाभन्दा बढी टिक्ने गरेको छैन । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई मात्र यसको संक्रमण हुने गर्छ । संक्रमितमध्ये ४.९४ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
माथि उल्लिखित विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत चिकित्सा क्षेत्रबाट सार्वजनिक भइरहेका तथ्य हुन् । यो नयाँ भाइरस भएका कारण अनुसन्धान जारी रहेको हुँदा नयाँ तथ्य बाहिर आउँदै जाने बताइएको छ । सुरुमा यो हावाबाट सर्ने अनुमान गरिएको थियो तर पछि थूक, र्‍यालजस्तो तरल चिजबाट मात्र सर्ने पत्ता लाग्यो । यो भाइरस चीनको वुहान प्रान्तमा गत डिसेम्बर ३१ मा फेला परेको थियो । त्यहाँ जंगली जीवजन्तुको मासु सेवनबाट यो भाइरस मानिसमा संक्रमित भएको आशंका सुरुमा व्यक्त गरियो । तर, अहिलेसम्म यसको स्रोतबारे यकिन भएको छैन ।
चीनको अर्थतन्त्र कमजोर पार्नविरोधी शक्तिले यो भाइरस बनाएर चीनलाई आक्रमण गरेको हो । चीन आफैंले जैविक हतियार तयार गर्ने क्रममा चुहिएर (लिक) भाइरस फैलिएको हो । खोप बेचेर ठूलो धनराशि कमाउने रणनीतिअन्तर्गत कसैले नियोजित रूपमा यो भाइरसलाई प्रयोग गरेको हो । भाइरस फैलाउनेमा कसैको षड्यन्त्र छैन, तर चिनियाँ अर्थतन्त्र कमजोर पार्न दाउ हेरेर बसेका शक्तिराष्ट्रहरूले मौकाको फाइदा उठाएका मात्र हुन् । विश्वका राष्ट्रहरूले गरेको स्वाभाविक निर्णय र सञ्चारमाध्यमको सूचना प्रवाहले अन्ततः चीनको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्न सहयोग पुग्नु संयोग मात्र हो ।
माथि उल्लिखित अनुमान र आशंका विश्वभर जनमानसमा उत्पन्न भएका छन् । रोग कसरी सुरु भयो भन्ने विश्वासिलो तथ्य बाहिर नआएसम्म मानिसहरूले अनेक आशंका गर्नु स्वाभाविक हो । आशंकाहरू सत्य वा असत्य जे पनि हुन सक्छन् तर विश्व समुदायबाट भएका क्रियाकलापको परिणामस्वरूप चिनियाँ अर्थतन्त्र कमजोर भएको भने सत्य हो । अमेरिका, युरोपमा यो भाइरस सुरु भएको भए पनि विश्व समुदायको यस्तै निर्णय र सञ्चार प्रवाह हुन्थ्यो या फरक ? यो प्रश्न धेरैको मनमा उब्जेको छ ।
भाइरसको वास्तविक प्रभावभन्दा पनि विश्वभर त्रास र आतंक बढी फैलिएकोमा विज्ञ र विश्लेषकहरू एकमत छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले कोरोनालाई चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिएको विश्लेषण गरिएको छ । यसको उदाहरणका लागि नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुतिलाई लिन सकिन्छ । भारतीय माध्यमले नेपालमा भएको वास्तविक क्षतिभन्दा बढी भयावह स्थिति रहेको अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुति गरे भनिएको थियो । कतिपयले भारतीय सञ्चारमाध्यमको नियतमाथि शंका गरेका थिए भने कतिपयले भारतीय सञ्चारमाध्यमको गुणस्तरमा मात्र शंका गरेका थिए ।
वर्षौं लगाएर गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धान (साइन्टिफिक रिसर्च) को नतिजाले समेत वास्तविकता नदेखाउन सक्छ । सञ्चारमाध्यमले दिने समाचार पनि नमुना (स्याम्पल) कै आधारमा हो । छिटो सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुतिले सिंगो समाजको वास्तविकता प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । सञ्चारमाध्यमहरूका सम्पादककै नजर र संवाददाताका नजरमा भएका घटनाको महत्व, प्राथमिकता, समाचार कोण (न्युज एंगल) र प्रस्तुति फरक हुने गरेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमको गुणस्तरबमोजिम नै सन्देशको गुणस्तर हुनु त झन् स्वाभाविकै भयो ।
कोरोना भाइरस, यसपछि विश्व समुदायका निर्णयहरू र सञ्चार प्रवाहका कारण विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर पारेको छ । चीनको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा क्षति पुगेको छ । विश्वभर मानिसहरूको हिंडडुल र गतिविधिमा कम भएका कारण सेवा तथा वस्तुको उपभोग घटेको छ । बिदामा गएका कामदार कर्मचारी फर्कन नपाउँदा उद्योगधन्दाको उत्पादन घटेको छ । क्वारेनटाइनका कारण आयात निर्यातको समय र लागत बढेको छ । चिनियाँ पर्यटकका आधारमा फस्टाएका विश्वका धेरै सहरको अर्थतन्त्र अहिले शिथिल छ । अहिले विश्वभर बेरोजगारी बढेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण एक जनामा देखिएको र मृत्यु शून्य भए पनि अर्थतन्त्रलाई क्षति पुगेको छ । पर्यटक आगमन कम हुनु, निर्यात घट्नु, आयात कम हुँदा महँगी बढ्नु हाम्रा लागि सुखद होइन । चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका ठूला परियोजनाहरू (मेगा प्रोजेक्ट्स) चिनियाँ कामदार कार्यरत छन् । उनीहरू चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश गएकामा फर्कन नसकेका कारण काम ठप्प भएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको, मानिसहरूको हिंडडुल र घुमफिर कम भएका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
नेपाल कोरोनामुक्त मुलुक घोषणा गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रीले ल्याए । अर्कातर्फ स्वदेशी सभा सम्मेलन र विद्यालयको पठनपाठन समेत बन्द गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गरियो । यी दुवै प्रस्ताव अतिवाद हुन् । विश्व कोरोना पीडित भएको र नेपालमा जहिले पनि संक्रमण भित्रिन सक्ने सम्भावना रहेको बेला कोरोनामुक्त देश भनेर प्रचार गर्नु संवेदनहीन र अपरिपक्व निर्णय हुन्थ्यो । त्यस्तै, सभा–सम्मेलन र पठनपाठन रोक्ने कार्य पूर्वतयारीका रूपमा गर्नु पनि कच्चा निर्णय नै हो ।
सीमा नाकाका साथै सबैतिर स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्रता दिनु, रोग भित्रिइहाल्यो भने कसरी जुध्ने भनेर पूर्वतयारी र योजना बनाउनु, आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्नु, रोकथामका उपायबारे जनचेतना फैलाउनु, सम्भावित आवश्यक वस्तु मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर आदिको उत्पादन बढाएर मौज्दात राख्नु बुद्धिमानी हो । तर यस्ता वस्तु रोग नआउँदै प्रयोग गरेर सकिएको र रोग लागिहाले अभाव हुने अवस्था छ । रोग नभित्रिँदासम्म आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्याे, कोरोना नदेखिएका मुलुकका नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण प्याकेजहरू प्रचारप्रसार गरेर बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सम्भावित भाइरस संक्रमणका लागि पूर्वतयारी पर्याप्त नगर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राख्नु कुनै अनौठो होइन । नियमित बिरामीका लागि नेपालमा उपलब्ध सेवालाई विश्वसँग तुलना गरेर रेटिङ (मापन) गर्ने हो नेपाल अझै खराब देशको सूचीमा पर्न सक्छ । नेपाल विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको रेटिङ गर्ने हो भने पनि एकदमै खराब अवस्थामा छ ।
चिकित्सा विज्ञान र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मानव सिर्जित वा निर्मित वस्तु, प्रविधि, संरचना, मेसिन एवम् असावधानीका कारण हुने मृत्युलाई प्रति १० हजारमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ । १० हजारमा एक/दुई जना मात्रको मृत्यु हुनुलाई पनि अति संवेदनशील मानिन्छ । सामान्य जनजीवनमा भने घटनाहरूलाई प्रतिशत अर्थात् प्रतिसयमा बुझ्ने गरिन्छ । चिकित्सकहरूबाट प्रवाह हुने सन्देश र प्रापकले ग्रहण गर्ने सन्देशको बीचमा हुने रिक्तता (कम्प्युनिकेसन इरर) ले गर्दा सर्वसाधारणहरू चिकित्सकको कुरा सुनेर अत्तालिने गरेको पाइन्छ । विकसित समाजमा मानवले रोक्न सक्ने सम्भावना भएको अकाल मृत्यु एकदमै नगण्य मात्र स्वीकार्य हुन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक दिन ५ जना व्यक्तिको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने गर्छ । यहाँ हुने दुर्घटना प्रायः सबै मानवीय गल्तीका कारण हुन्छन् । प्रायः सडकको दुरवस्था, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, गति सीमाको उल्लंघन, भार सीमाको उल्लंघन, सवारी साधनको दुरवस्था र चालक वा दोस्रो पक्षको लापरबाहीका कारण नै दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर विभिन्न कारण अकालमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू मरिरहेका छन् । यसको तुलना गर्ने हो भने कोरोनाको कारण मर्नेको संख्या उल्लेख्य हुन आउँदैन ।
कारोना भाइरसको प्रभाव गरिब मुलुकमा खासै देखिंदैन । तुलनात्मक रूपमा दूषित र प्राकृतिक जीवनयापन गर्ने मानिसहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएकाले यसो भएको हुन सक्छ वा यो संयोग मात्र पनि हुन सक्छ । विश्वका १ सय ७८ देशमा कोरोना फैलिसक्दा धेरै गरिब मुलुकमा अझै संक्रमण देखिएको छैन । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको चीनको सीमा जोडिएको देश भारतमा १ हजार ६ सय ३७ जना संक्रमित भई ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या उच्च हुनेमा चीनपछि इटली, इरान, कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, डेनमार्क र बेलायत छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण नेपालमा सयौं व्यक्तिमा गम्भीर मानसिक र मनोवैज्ञानिक समस्या देखा परेको थियो । कोरोना संक्रमितको सम्पर्क हुँदैमा सबैलाई सर्दैन, सरे पनि सबै मर्दैनन्, सकेसम्म सावधानी अपनाउने हो, मर्नैपर्ने एकाध मानिसमा आफू परिएछ भने पनि ठीकै छ भनेर मनोबल बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न शारीरिक स्वास्थ्य समस्या र यसको रोकथामका लागि गरिने खर्च भन्दा ठूलो समस्याका रूपमा मानसिक रोग निम्तिने र अर्थतन्त्र सखाप हुने सम्भावनातर्फ सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
तीन अग्रजसँगको सहकार्यको स्मरण
डा. उद्धव पुरी
यस वर्षको अन्तिम समयतिर आइपुग्दा मसँग परिचित तीन जना अग्रजहरु आफ्नो कर्मभूमि वा भूलोक छोडेर जानुभयो । त्यसोत धेरै आफन्त र केही साथीभाइ पनि बित्नुभयो । उनीहरुसँगको सम्झना र सबैप्रति समवेदना त छँदैछ । तर माथि उल्लेख गरिएका अग्रजहरुसँगको परिचय र सहकार्यको बेग्लै महत्व र स्मरण छन् जुन अरुभन्दा भिन्न लाग्छ मलाई । मैले उहाँहरुको नाम लिदा उहाँहरुसँगको व्यक्तिगत अरु काहनी, राजनीति र कसैको अरु प्रसंगसँग मेरा कुरा जोडिँदैनन् । उहाँहरु मध्ये दुई जनासँगको मेरो परिचय लुम्बिनी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र गौतम बुद्ध र बुद्धधर्मसँग सम्बन्धित छन् भने अर्का एक जना हिन्दु धर्मका पण्डित बिगतमा मेरोघर परिवारसँग पनि सम्बन्धित छन् ।
गजेन्द्रकुमार लामा जो केही दिन अगाडि उपचारकै क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा बित्नु भएको खबर सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी भयो । केही महिना अगाडिसम्मको भेटमा उहाँको शारीरिक अवस्था त्यति कमजोर भएजस्तो लाग्दैन थियो र यो खालको अनुमान गरिएको पनि थिएन । तर जन्मनुको अर्थ मृत्युसँग जोडिएकोले र त्यो मानवजातिको बहसको कुराभन्दा बाहिरको भएकोले त्यहाँ कुनै विकल्प रहेन । मैले सोच्ने लौ यति नै रहेछ भन्नेमात्र हो । मलाई यस्ता विषयमा खासै बिलौना गरेर पनि केही हुँदैन भन्ने लाग्छ । यथार्थता हुँदाहुदै अरु नौटंकी गर्न मन पनि लाग्दैन । कति मानिसहरु मृत्यु अगाडि र पछाडिमा आकाश जमिन फरक हुन्छन् । उनीहरुका गतिविधि मलाई ज्यादै उराठ लाग्छ । जसमा कुनै प्रकृतिक स्वभाव र सद्कर्म र सद्कार्य भन्ने देख्दिन ।
तर समाज त्यसैमा रुमल्लिएको देख्दा र उनीहरु मर्दैनन् कि वा झुट दीर्ध हुँदैन भन्ने किन धेरैले नबुझेका होलान् । गजेन्द्रकुमार लामासँग मेरो भेट सन् १९९८ तिर भएको हो । त्यसबेला उहाँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयमा लुम्बिनमिा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन पनि हुँदै थियो । काठमाडौं र लुम्बिनीमा भएको पटक पटकको भेटले मैले उहाँलाई सकारात्मक सोच भएको निकै सरल र सहज सम्पर्कका व्यक्तिको रुपमा पाए । जसले गर्दा उहाँसँग लुम्बिनी, बौद्ध धर्म र बौद्ध सञ्चार, बौद्ध अध्ययन, अनुसन्धान र इतिहासका सम्बन्धमा कामहरु भइरहे । उहाँले कहिल्यै पनि असहयोग गरेको अनुभव भएन । काँग्रेसका नजिक भएपनि उहाँमा कसैमाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राख्ने आन्तरिक सोच पनि थिएन । उहाँ लुम्बिनीमा राजनीतिक नियुक्ति कै क्रममा पुगेको भएपनि त्यसको पछाडि बौद्धको विशेष योगदान छ । बौद्ध स्तुपाको सामुन्ने अति सम्पन्न परिवारमा जन्मेका बौद्धवासीका आलेमामा उर्फ गजेन्द्रकुमार लामाले धेरै सम्पत्ति बौद्ध र बौद्ध धर्मको विकासमा पनि सक्दै आउनु भएको थियो । उहाँ बौद्धवासीका लागि सधंै अमर रहनुहुन्छ । उहाँका केही राम्रा नराम्रा संगतहरुलाई छोडेर म एउटा प्रसंगमा म अलि बढी व्याख्या गर्न कोशिष गर्छु । उहाँको यस देशका धेरैजसो बिद्धान वर्ग र बौद्धधर्मका गुरुहरुसँग बिनापूर्वाग्रह राम्रो सम्बन्ध थियो । सबैलाई सम्मान दिन जान्नुहुथ्यो । अध्ययन र अनुसन्धान कार्यमा आफै संलग्न हुन नसके पनि त्यसलाई सघाउने र सहयोग समेत गर्ने उहाँको बानी थियो । कतिले उहाँसँग कति फाइदा लिए होलान् तर उहाँ त्यसलाई अन्यथा लिएर कहिल्यै कुरा काट्न चाहनु हुदैन थियो । यो उहाँको उदार र सहज सोचलाई मैले पूर्ण रुपमा व्यबहारमा उतार्न चाहेपनि सम्भव गराउन सकिरहेको छैन । लुम्बनीको कार्यकाल पछि पनि उहाँले कहिल्यै लुम्बिनीलाई आफ्नो कार्य र सोचमा आझेलमा पार्नु भएन ।
केही वर्षको अन्तराल पछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । उहाँलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारीमा राखिएको थियो । अर्थात उहाँ विश्वविद्यालयको पहिलो कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहन्थ्यो । विश्वविद्यालयको स्थपनाको ती जटिल दिनमा म पनि संलग्न भएकोले उहाँसँग धेरै वर्ष सहकार्य भए । जुन स्मरणमा ताजै रहनेछन् । त्यसबेलाको त्यो परिदृश्य नेताहरुको धुपौरे पदाधिकारीहरुलाई कथा जस्तो पनि लाग्दैन । किनभने उनीहरु इतिहासलाई सक्षी राखेर नभइ इतिहास नै मेटाएर अडाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने गलत सोच हाबी छ । विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन उहाँले गर्नुभएको निःस्वर्थ सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण छ । बौद्ध धर्ममा यसलाई सम्यक कर्म मानिन्छ । उहाँले गर्नुभएको थियो । यहाँ उहाँको एउटा अनौठो स्वभाव र बानीको बारेमा उल्लेख नगरी रहन सक्दिन । कसै कसैले त्यसलाई उहाँको कमजारीको रुपमा पनि लिएका छन् र कसै कसैले त्यसबाट आफ्नो स्वर्थसिद्ध पनि गरेका छन् । उहाँ आफूले मान्ने ठानेको गुरु वा विद्धानको मन दुखाउन चाहनु हुँदैन थियो र आफूलाई गलत भन्ने लागे पनि त्यसलाई मानिदिनु हुन्थ्यो र सही गरिदिनु हुन्थ्यो । उहाँले आत्मैदेखि आफूले गलत मनसायले नगरेको कारणले होला त्यसको गलत प्रतिफल यहाँले भोग्नु परेको देखिँदैन । अघिल्ला दिनहरुमा परिस्थितिका कारण संयोगले मात्र भेट हुन्थ्यो । बरु उहाँको बौद्ध दर्शन र इतिहासमा विद्यावारिधि गर्ने कार्य भने धेरै वर्षदेखिको थियो, जुन अधुरै रहयो । बौद्ध धर्मको एउटा मर्म छ कि बुद्ध वा बोधिसत्वमामात्र पूर्णता हुन्छ ।
बेखारत्न शाक्य धेरैले उहाँलाई राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेताको रुपमा मात्र चिन्दछन् । पछिल्ला दिनहरुमा उहाँ नेपाली काग्रेससँग जोडिए पनि राजनीतिमा त्यसभन्दा पहिले पनि ललितपुरमा सबैले चिनेकै नाम हो । राजनीति र समाजसेवा सिद्धान्तगत रुपमा फरक पनि हो । तर सच्चा राजनीतिज्ञ भने सही अर्थमा समाजसेवी पनि हो । बेखारत्नलाई धेरैले त्यही रुपमा चिन्दछन् । तर मेरो उहाँसँगको चिनजानमा कुनै राजनैतिक गन्घ छैन । न मैले न उहाँले कहिल्यै पनि त्यस्तो अनुभव गरे जस्तो पनि लाग्दैन । उहाँले गरेका धेरै कुराहरु सच्चा मनदेखिनै आएको लाग्थ्यो र उहाँलाई सधाउन पनि कोसिस गर्थे । पाटनका शाक्यहरु आफूलाई बुद्धको सन्तान मान्दछन् । कपिलवस्तुमा शाक्यहरुको समुयिक बध भएपछि शाक्यहरुको भागाभाग भयो केही भारततर्फ लागे भने केही उपत्यका तिर आइपुगे । उपत्यमामा आएपछि नेवार संस्कृतिमा मिले । उनीहरुले पनि बौद्ध धर्मलाई वा पछिल्ला दिनहरुमा बज्रयानलाई जीवित राख्न योगदान गर्दै आएका छन् । थेरवाद भिक्षुहरु पनि बन्ने गर्दछन् केही शाक्यहरु । लुम्बिनीमा बस्नुहुने अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष समेत रहनु भएका भिक्षु मैत्रीय पनि बेदारत्नकै नाती पर्नुहुँदो रहेछ । करिव ८९ वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएका उहाँलाई धेरैले बेखादाई भन्थ्ये । उहाँ सबैका सहयोगी र मिलनसार पनि हुनुहुन्थ्यो ।
पाटनमा उहाँलाई सभापति, मेयर आदिका कारण र बौद्ध धर्म एवं बौद्ध शिक्षाको अग्राणीताका लागि पनि चिन्दछन् । उहाँ नगरपालिका महासंघको पहिले अध्यक्ष पनि हुनु भयो । तर मसँगको चिनजान भने लुम्बिनी र बौद्ध शिक्षाको कारण भएको हो । यहाँनेर एउटा कुरा भन्नैपर्छ नेपालमा बौद्ध शिक्षा वा बौद्ध धर्म संकुचनमा परिराख्नुको एउटा कारण केही बौद्धमार्गी भन्नेहरुले आफूलाई जन्मेकै आधारमा बौद्ध विद्धान र ज्ञाता मान्दछन् र अरुलाई कहिल्यै अगाडि पर्न दिदैनन् । त्यो सोच उपत्यकामा धेरै छ । बेखारत्न बिलकुल त्यो भन्दा भिन्न थिए । उहा लुम्बिनीको विकास र नेपालमा बौद्ध शिक्षा फैलाउन आफ्नो ठाउबाट लागिरहेकै थिए । कसैको स्वर्थ नमिलेर उहाँले ती ठाउमा ठूलै पद नपाए पनि निरास भने हुनुहुन्नथ्यो । बोलाएको ठाउमा पुग्ने र आफ्नो योगदान उपलब्ध गराउन छोड्न हुन्नथ्यो । उहाँसँग आफ दी रेकर्डमा यस्ता कुराहरु धेरै हुन्थ्ये । उहाको जस्तै लुम्बिनी र नेपालमा बौद्ध शिक्षा फैलाउने चिन्तन र बिधिका अनुयायी कति छन् कुन्नी म जान्दिन ।
पण्डित कृष्णहरि सुवेदी मलाई धार्मिक शिक्षा दिएर प्रभावित गर्ने गुरु मध्येका गुरु हुनुहुन्छ ।जसका कारण पनि म यस क्षेत्रमा अलिबढी संलग्न भए । परिचय दिनेहरुले नेपाल सरकारको हालका सञ्चार सचिव मित्र दिपक सुवेदीका पिता पनि भन्दछन् । मेरालागि उहाँसँग बेग्लै परिचय छ । ९३ वर्षको उमेरमाकेही दिन अगाडिमात्र स्वर्गवास हुनुभएको उहाँ काठमाडौबाट चितवन बसाई सर्नुभएका कारण त्यति सहज भेट हुदैन थियो । पछिल्ला दिनहरुमा धेरै समय काठमाडौंमा नै बसे पनि अहिले पछुताउनु बाहेक केही बाकी रहेन । मेरो पिता माताले घरमा सप्ताह र नबाह माहायज्ञ आयोजना गर्दा उहाँनै पण्डितका रुपमा आउनु हुन्थ्यो । तीसैं वर्ष अगाडिको कुरा हुन् मैले मेरै घरमा उहाँको प्रवचन सुन्दा र उहाँको ती दिनहरुको व्यबहार देख्दा ज्ञान, ज्ञानी र अध्ययनको अर्थ बुझ्न पाए अनि सनातन धर्मको ममज्ञताको सामिप्य हुन पाए । पाप र धर्मको डर भन्दा ज्ञान र कर्म ठूलो रहेछ । जुन आफूले अनुसरण र अनुभव गर्ने विषय रहेछ । उहाँको धेरै प्रवचनहरु मसँग क्यासेटमा संग्रह छन् । म बेला बेलामा सुन्ने गर्छु । अहिले हल्ली खल्लीमा रहेका चन्दा उठाउने भाषणकर्ताहरु कथित पण्डित उहाँहरु जस्ताको अगाडि कुनै अर्थ राख्दैनन् । उनीहरु सनातन धर्मलाई अव्यवहारिक र असांस्कृतिक बनाउने धर्म नाश बाहक हुन् । जसले गृह धर्म नाश गराई पर धर्मको पोषण गरिरहेका छन् ।
केही दिनदेखि क्रमशः आफ्नै कालगतिले मृत्युवरण गरेका यी तीन अग्रजहरु नेपाली समाजमा सर्व परिचित हैनन् । किनभने उनीहरु त्यो परिचयका बाहक ने हैनन् । जुनसुकै धर्मले पनि कर्मलाई परिभाषित गरेको छ र सतकर्मलाई वा सम्यक कर्मलाई उत्तम ठानेको छ । यसको लागि ज्ञानको भूमिका रहन्छ । ज्ञान भएका मानिसहरु धार्मिक हुन्छन् । धर्म भनेको सकारात्मक चिन्तन र पुण्य कम हो यस्तो विशेषता सबैसँग हुदैन । उनीहरुमा त्यो थियो । त्यसैले उनीहरुलाई जसले चिन्दछ ऊ सधै नजिक रहन्छ र अनुयाी हुन्छ । अब यो अभाव भएको छ या राष्ट वा समाजलाई प्रगतिशील बनाउने र उन्नत समाज निमार्णको लागि क्षति पनि हो ।
मेरो सुन्दर देश महामारीको चपेटामा नपरोस्
- केसर बिश्वकर्मा
कुनै पनि देश महामारीको चपेटामा पर्नु राम्रो त होइन तर हामीले देखिरहेका छौं कैयौं बिकसित देश आज रोइरहेको छ ; स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ । परिवारको सदश्यले मृत्युबरण गर्दै गर्दा हेरेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ भनौं, मृतक शरीर उठाउन सक्ने अबस्था छैन । यस्ता परिदृश्यहरुको सायद कल्पना गर्न सकिँदैन तर सन्चार माध्यमबाट हेर्दै गर्दा देखिन्छ - आफ्नो परिवारको सदश्य मृत्यु भई रहँदा हारगुहार, चिच्यावट र आँसु कसैले सुन्न सक्ने अबस्था छैन । त्यो परिदृश्यले हामीलाई पाठमात्र होइन प्रशस्त सुरक्षीत हुने मौका र समय प्रदान गरेको छ ।
दु:ख र कष्टमा अनेकौ समस्यहरु त अबस्य झेल्न्नु पर्दछ, अझ हाम्रो देशको जीवन शैली र जिबनयापनलाई हेर्ने हो भने त कैयौं परिवारमा चुलो बल्न द्यौ द्यौ होला । कैयौं बालबच्चा भोकभोकै बस्नु पर्ने अबस्था पनि आउला । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवार लाखौं छन, जुन यो परिस्थितिमा सम्भब छैन मजदुरी गर्न यसका लागि, भोकमरिको त्यो खाडललाई पनि राज्यले त्यतिकै गम्भीरतापुर्ण हेर्नु पर्दछ ।
विशेष केही दिन देखिको लकडाउन र जनस्तरमा परेको एक किसिमको पीडा अत्यन्त दु:खदायी छ तर समय र महामारीको चपेटामा गुज्रिएका देशहरुको अबस्था हेर्दा महिनौ सम्म लकडाउन गर्नु पर्ने देखिन्छ- त्यो पनि पूर्ण रुपमा संकटकाल नै लगाएर । अहिले नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएका देशहरु पनि एक, दुई, तीन, चार हुँदै यो अवस्थामा पुगेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल रहेका देशहरु पनि नराम्रो संग चुक्यो । सायद त्यहाँ राज्य र जनताको कहि न कहि कमजोरी भएरै हो ।
हामीले प्रसस्त समय पाएकै हो र अझै समय छ त्यो कहाली लाग्दो परिबेश र कहालीलाग्दो घटनाहरुबाट जोगिने । सायद हामी भाग्यमानी देशका नागरिकहरु पनि हौँ कि सयौं देशले महामारी बेहोरिरहनु पर्दा हामिलाई पूर्व तयारीको समय प्रसस्त प्राप्त थियो । यो हुँदा हुँदै पनि आजको दिनसम्म पाचौं संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, त्यही पनि प्राय: बिदेशबाट आउनेहरुमा मात्र । उहाँहरुको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरौ ।
अन्य देशमा जस्तो स्थिति बढ्दै गयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर हाम्रो देशको अबस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्न सकिदैन । भोलि हामी पनि त्यही देसको अबस्थामा पुग्नेछौ जुन हाम्रो आँसु र रुवाई कसैले देख्ने सुन्ने छैन । सरकारले गरेका निर्णयलाई सबै नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट पूर्ण सहयोग गरौं, सरसफाईलाई ध्यान दिऔं र सबैले कामना गरौं - यो सुन्दर देश भोलि लासै लासको शहर नबनोस । सबै प्रतिबद्ध भई लकडाउनलाई सफल पारौं र पहिलो चरणमा नै यो महामारीलाई निर्मुल पार्न सकौ । मेरो सुन्दर देश महामारीको चपेटामा नपरोस् ।
उपभोक्तावाद र सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न
व्यावसायिक संगठनको आधारभूमि समाज नै हो । व्यवसायको अस्तित्व समाज रहे मात्र रहन्छ । समाज नरहे व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलाप अवश्य रहँदैन । अर्थात् व्यावसायिक संगठनहरूले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि समाजमा नै गर्छन् । समाजलाई आफ्नो नाफा आर्जन गर्नेदेखि सारा उद्देश्य पूरा गर्ने आधार व्यवसायले बनाएको हुन्छ । तसर्थ समाजप्रति व्यावसायिक संगठनहरूको अधिकदायित्व हुने गर्छ ।
व्यवसायले समाजमा रहेर उपभोक्ता, सरकार, कर्मचारी र आफैंप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्छ । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी व्यवसायले समाजमा गरेको गतिविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सामाजिक लेखा परीक्षण हो । सामाजिक लेखा परीक्षणले व्यवसायहरूले कसरी सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएका छन् भन्ने अनुगमन गरी विवरण तयार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धी राख्छ । यस्तो लेखा आन्तरिक एवं बाह्य गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अर्थात् मूल्याङ्कनगर्ने बाह्य सामाजिक लेखा परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
सामाजिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्वान् बाउर र फेनले भनेका छन्, “सामाजिक लेखा परीक्षणबाट वचनबद्ध एवं व्यवस्थित रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने र कम्पनीको क्रियाकलापबाट भएका महत्वपूर्ण विषयहरूको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ, जसबाट समाजमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।”
अर्का विद्वान् केथ डाभिज र रवर्ट ब्लाभस्ट्रोमले भनेका छन्, “सामाजिक लेखा परीक्षण एक व्यवस्थित अध्ययन हो, संगठनको सामाजिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ जुन आर्थिक कार्य सम्पादनभन्दा भिन्न छ ।”
यसरी सामाजिक लेखा परीक्षण व्यवसायले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुे कार्यसँग सम्बन्धित छ । व्यवसायले सामाजिक पृष्ठभूमिमा आफूलाई कायम राखेर समाजका लागि के–कस्तो कार्य गर्‍यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन विवरण नै सामाजिक लेखा परीक्षण हो । यस्तो लेखा परीक्षण कार्यमानसँग तुलना गरी तथ्याङ्क संकलन गर्न, कार्य सम्पादनमा सजग रहन, लाभ–लागत विश्लेषण गर्न गर्ने गरिन्छ । आजको व्यावसायिक युगमा व्यावसायिक संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै आएको पाइन्छन् । नेपालको हकमा पनि त्यो खालको सुरुवात र प्रयास भएकै छन् । यद्यपि प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् । त्यसका धेरै कारण छन्, अहिलेलाई त्यसतर्फ नजाऔं ।
सामाजिक लेखा परीक्षणलाई दुई भगमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको पाइन्छ । एउटा अनिवार्य लेखा परीक्षण र अर्को ऐच्छिक लेखा परीक्षण । अनिवार्य लेखा परीक्षण सरकारद्वारा नीति–नियमका आधारमा संगठनहरूलाई अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षण गर्न लगाइन्छ । प्रदूषण नियन्त्रण, समान रोजगारी र वस्तु सम्पादन आवश्यकताको मुद्दामा यस्तो लेखा परीक्षण केन्द्रित हुन्छ । ऐच्छिक सामाजिक लेखा परीक्षण भने व्यवसायले इच्छाले जनविश्वास आर्जन गर्ने गर्छ । मूलतः शिक्षा, बिक्रीपछिको सेवा, सार्वजनिक जनचेतनाजस्ता कुराहरू यसमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूलाई अनिवार्य सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान लागू गरेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत बैंकहरूले खर्च गर्ने रकममध्ये केही निश्चित प्रतिशत रकम प्रदेशहरूमा पनि खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । तर, कतिपय बैंक तथा वित्तिय संघ–सस्थाहरूले भने यसरी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी भन्दा देखावटी हिसाबले मात्रै खर्च गरिरहेका छन् । अझ अघि बढेर भन्दा सही सबुत ठाउँ खोजेर खर्च गर्ने भन्दा बढी प्रचार गर्ने कामजसो बढी गरिरहेका छन् । बैंकहरूले कमाउने भन्दा बढी ध्येय अरू राखिरहेका छैनन् । एउटा पब्लिक कम्पनीले आफू निहित समाजको वरपर आम्दानीको केही अंश निशंकोच खर्च गर्नु उसको दायित्व नै हो । तर, नेपलमा यसरी उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरालाई बोझका रूपमा पनि लिइएको देखिन्छ ।
उपभोक्तावाद र सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्बन्ध
उपभोक्तावाद वर्तमान विश्वको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं जोन एफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा चारवटा उपभोक्ता अधिकार निर्णय गरेको ऐतिहासिक दिन हो । ती हुन्— ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक वस्तुहरूको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार, छनोट गर्ने अधिकार, सुसूूचित हुने अधिकार, सुनुवाइको अधिकार । यस्ता अधिकार उपभोक्ताले सुनिश्चित भएको पाउनु नै उपभोक्तावाद भन्ने गरिन्छ । व्यावसायिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मक क्रियाकलापमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, अनावश्यकमूल्य वृद्धि, कमतौल, मिसावट, अखाद्य वस्तुको प्रयोग, गहन सूचना–प्रवाह, सामाजिक मान्यताविरुद्ध ओर्लनु आदि उपभोक्तावाद विरुद्धका क्रियाकलापहरू हुन् । यस्तै अनैतिक व्यावसायिक क्रियाकलापहरू नेपालमा जति सायदै अन्त कुनै देशमा होलान् । तर, नेपालमा यस्ता क्रियाकलाप रोक्न जुनै पनि सरकार र मन्त्रीहरूले सकिरहेका छैनन् । त्यसको आन्तरिक कारणहरू के–के होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यस्तै क्रियाकलापविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ भएको पाइन्छ । खासगरी यस्तै क्रियाकलापविरुद्ध उठ्ने आवाज नै उपभोक्तावाद हो । सामान्यतया उपभोक्तावाद र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका क्रियाकलाप पूरा नभएपछि उपभोक्ताबाट गुनासा र आवाजहरू उठ्न थाल्छन् । अर्थात् उपभोक्ताहरूले उठाउने हक–हितका कुराहरू नै सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्छन् ।
आजको विश्वमा उपभोक्ताले नै नयाँ–नयाँ वस्तु तथा सेवाको माग र बजार सिर्जना गर्छन् । उपभोक्ताले वस्तु आकर्षण बढाएर वस्तु खरिद गर्न सुरु गर्दा मात्र माग बढ्ने हुन्छ । यदि अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएमा उपभोक्ताले मध्यस्थ वस्तुको खोजी गर्न सक्छन् । यसरी उपभोक्ताहरूको क्रियाकलाप आर्थिक रूपमा केन्द्रित हुन्छन् । समग्रमा भन्दा व्यवसायको सम्पूर्ण क्रियाकलाप उपभोक्तामा नै निर्भर गर्छ । त्यसर्थ संगठनले उपभोक्ताको आवश्यकता चाहना, हकहितलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्य गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु, गुणस्तरीय एवं कममूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनु, आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुका साथै ग्राहकका हक संरक्षण गनुव्यावसायिक संगठनको उत्तरदायित्व हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उपभोक्तावाद र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच गहिरो सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ ।
तर नेपालमा अन्तरसम्बन्धित यी दुवै विषय प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । न त उपभोक्तावाद लागू भएको छ, न त व्यावसायिक संघ–संगठनहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व नै वहन गरेका छन् । यदि गरेका छन् भने पनि धेरैजसो त्यसलाई प्रचार र प्रपोगाण्डाको विषय बनाएका छन् । ग्राहक तथा उपभोक्ताहरूले आफ्नो हकहितका कुराहरूमा निसंकोच आवाज उठाउन नसक्नु, कसैले उठाइ हाले पनि त्यसलाई सर्मथन नगरिनु र जसले जे गरे पनि सहेरै मात्र बस्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएकाले पनि व्यावसायिक अनियमितता एवं ठगी बढिरहेको छ । त्यसकारण उपभोक्ता हित, जागरण र सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा राज्य, सरोकारवाला निकाय र आम सर्वसाधारणको नै ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । एउटा सचेत नागरिकले आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु, सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भए नभएको थाहा पाउनु र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि त्यसलाई केलाएर हेर्नु, ऐन कानुनअनुसार उपभोक्ता हकहितबारे आवाज उठाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र उपभोक्ता र समाजको हित हुन सक्छ ।
किन पुग्न सक्दैनन् नेतृत्वमा महिला
प्राकृतिक रूपमा नारी पुरुष भिन्न छन । असमान छन । आ–आफ्ना विशेष क्षमताले सुसज्जित छन् । तर नारा लाग्छ । नारी पुरुष बराबर हुन्, छन् र हुनुपर्छ । यो बिरोधाभाषपूर्ण समानताको नारासँग म असहमत छु । यद्यपि नारी अधिकार, नारी स्वतन्त्रता, नारी हक र नारी सुरक्षाको लागि मेरो आवाज सँधै उठ्छ ।
विशेष क्षमता र गुण नारीमा रहेको हुन्छ । यही विशेष गुणकै कारण शारीरिक क्षमतामा नारी पुरुषमा भिन्नता छ । पुरुषले जस्तै कडा शारीरिक परिश्रम सबै महिलाले गर्न सक्दैनन् । तर केही महिलाले पुरुषले भन्दा ज्यादा कठिन शारीरिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यसको अर्थ यो होइन कि नारी र पुरुष बराबर शारीरिक क्षमताका हुन्छन् ।
मलाई लाग्छ असमान तर विशेष भूमिका र फरक–फरक क्षमताले स्त्री र पुरुष भिन्न छन् । महिलाको सबाल र पीडा बुझ्न महिला हुनु आवश्यक हो । तर सबल र सक्षम महिला अत्यावश्यक हुन्छ । यहाँ कोरम पुर्‍याउन र समावेशी देखाउन मात्रै हर स्थान र हर क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व गराइन्छ, जुन सर्बथा अनुचित र अस्वाभाविक हो ।
निर्णय क्षमता विहिन नारीलाई प्रतिनिधित्व गराएर नारी हक र अस्मिता छिन्ने निर्णय गराउन लगाउने परिपाटी हानीकारक छ । प्रतिनिधित्व थोरै रहोस्, तर निर्णय क्षमता प्रवल होस । आम नारीले ध्यान दिनुपर्ने र स्मरणमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधित्व अहम विषय होइन प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्व चाँहि मुख्य सबाल हो ।
यहाँ नारीलगायत जात जातिको प्रतिनिधित्व केवल ल्याप्चे लगाउन र छडके किनाराको साक्षी बस्न मात्रै प्रयोग र उपयोग गरेको पाइन्छ । आफ्नो समुदाय, आफ्नो वर्ग र क्षेत्रको पक्षमा बोल्न लेख्न र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रतिनिधित्व र समावेशीता केवल विधान र संविधानको प्राबधान उलंघन गरेको नदेखिन र कारवाहीबाट बच्न मात्र सहयोगी हुनेछ ।
महिला र विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व देखाएर कुटिल राजनीति गर्न छक्काउन भुलाउन काम लाग्छ वास्तविक पीडामा मलम लगाउन सक्दैन । प्रतिनिधित्वले व्यक्तिको उन्नति होला हुन सक्ला । तर सबल र सक्षम प्रतिनिधित्वले मात्रै महिला समुदायको हित गर्न सक्छ । समग्र महिलाको ध्यान दिन सक्छ समुदायको हितको पक्षमा निर्णय गराउन सक्छ ।
समानता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता केवल शब्दमा आदर्श फलाक्न देख्न पाइन्छ तर व्यबहारमा पाउन सँधै कठिन छ । नारी माथि शोषण दमन अन्याय र अत्याचार गरिने संस्कार हाम्रो देशमा मात्रै होइन, छैन विगतदेखि नै नारीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक ठान्दै आइएको सत्य हो आज पनि संविधान र नियम कानुनमा बराबरी र समान हैसियत लेखिए पनि व्यबहारस्यो लागू भएको छैन ।
पुरुषवादी मानसिकताबाट महिलालाई आज पर्यन्त हेयको दृष्टि राख्छ । जनप्रतिनिधि मुलक संस्थामा नारीको प्रतिनिधित्व आकर्षक नारा बनेको छ । स्थानीय निकायमा करिब ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको हौवा फिजाएर अन्यत्र ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल गठन गर्दादेखि प्रदेस स्तरीय मन्त्रीमण्डलसम्ममा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।
पार्टीहरुको केन्द्रिय नेतृत्वमा पनि महिला प्रतिनिधित्वको सबालमा बिजोग छ । तर पनि महिला अधिकार र महिला मुक्तिको कुरा पार्टीहरु लाज नमानेर नै गर्छन् । महिलाहरु पत्याएर नै पार्टीको पछि लाग्छन् र नयाँ रुप र स्वरुपमा ठगीमा पर्छन् । आफ्ना लागि र आफ्नो समुदायका लागि महिलाहरुले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने पार्टीको बधुवा मजदुर र कमरा कमारी जस्तै बनेर विवेक बन्धक राखेर पार्टी ह्वीपमा सरण पर्दा महिलाले महिलाको बारेमा निर्णय गर्न सक्तैनन् र महिला मुक्तिको आन्दोलनले छिटो गन्तव्य पाउन सक्दैन ।
आफ्नो पार्टीको कमजोर पुरुषलाई भोट दिने अरु पार्टी र स्वतन्त्र तर अब्बल नारीलाई भोट नदिने नारी र महिलाअधिकारकर्मीले नारी दिवस र महिला प्रतिनिधित्व पुगेन भनेर चिच्याउनु हास्यास्पद छ । सार्थक नारी अधिकारको पक्षमा रहने सबै नर नारीहरुलाई नारी दिवसले रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोगी अनि परस्परमा विश्वासयोग्य बन्न प्रेरित गरेर महिला अधिकारको रक्षार्थ पार्टीको बन्धन र साँङ्लो चुढाएर स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
नारी दिवसमा यो संकल्प सबै महिला अगुवा र महिला नेतामा हुनुपर्छ अन्यथा नेताले छुट्टायाएको कोटामा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्न खोजेर महिला प्रतिनिधित्व र महिला मुक्ति हुन नसक्ने प्रष्ट छ । महिलाहरु आफ्ना कमजोरीको कारण पनि नेतृत्वदायी पदमा पुग्न सक्तैनन् जसको उदाहरण शिवमाया तुम्बाहाम्फेको सभामुख पदमा रोकावट रहयो । संसद भित्र र बाहिरका सबै महिलाहरूले, महिलाअधिकारवादीले एक स्वर र एक मुखमा बोल्नुपर्नेमा स्वंय नेकपा भित्रका महिलाहरूले समेत एक भएर बोल्न सकेनन् ।
पार्टीलाई दवाव दिन सकेनन । उल्टो गुटगत राजनीतिको शिकार बनेर सभामुखमा महिला पुग्ने अवसरमा घात गरे । सबल र सक्षम महिला उम्मेद्वार छोडेर कमजोर पुरुष पात्रलाई भोट गर्ने पार्टीहरुको व्हिप र लगाम रहुन्जेल, पार्टीको त्यो टाइपको दासता स्वीकारगरुन्जेल महिला स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलन निर्बल र विचरा बनिरह्न्छ ।
मौसमी नारीवाद र नारी अधिकारकर्मीहरुले सदावहार महिला अधिकार कर्मीमा आफूलाई रुपान्तरण गरेर गम्भीर समीक्षा नगरेसम्म आज नारीहरु जुन हबिगत र अवस्थामा छन अरु दशकौ यस्तै अवस्था रहन सक्छ । ‘इक्वोल फर एर्भीवन’ अर्थात् ‘प्रत्येकका लागि समान’ नारा दिएर हरेक वर्ष जस्तै यो वर्षपनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संसारभरी मनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्षको नारा ‘म आत्मसात गर्दैछु महिला अधिकार समानता दशक’ राखेको छ । यसको पालना शासन प्रशासन र घर मुलिको डाडु पन्यू लिएर बसेका आम पुरुषले आफ्नो घर देखि कार्यलयसम्म गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुरुषले मेरो हक खोज्न आएकी भनेर महिलालाई बुझ्ने र सो मुताबिक व्यबहार गरेको कारण महिलाहरुको हक र स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको यथार्थ मनन गरेर जानुमा सामाजिक न्याय प्रतिबिम्बित हुन सक्छ । महिलालाई प्रोत्साहन, महिलालाई अधिकार, महिलालाई शिक्षा र महिलालाई अवसर प्रदान गर्न सकियो भने घर, समाज सभ्य र देश सभ्य हुने वास्तविकता नभुलौ ।
सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भएको विभिन्न देशका समाजवादी महिलाहरुको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हरेक वर्ष विश्वभर ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन माग गर्यो ।
सन १९११ मा रास्ट्रसंघले उक्त प्रस्ताव पारित गरि मनाउन सुरु गरे यता मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुले कामको आधारमा निश्चित ज्यालाको मागसहित गरेको प्रदर्शनलाई विश्वका महिलाहरुको आन्दोलनको सुरुवातको रुपमा लिने गरिएको छ ।
आज पनि नेपालमा महिला र पुरुषले सामान काममा पाउने ज्याला असमान छ । दैनिक १७ घन्टा काम गरेपनी कामको मुल्यांकन छैन । श्रम र ज्यालामा भएको असमानताको अन्त्य नहुँदा सम्म लैंगिक हिंसा पनि अन्त्य हुँदैन । यहि सत्यलाई बोध गर्दै यस बर्ष महिला रोकिए संसार रोकिन्छ भन्ने नारा लिएर बिबिध कार्यक्रम हुनेछ । सन्तान उत्पादन देखी सबै कामहरुमा महिला रोकिने हो भने पक्का संसार रोकिन्छ । त्यसैले महिलाको मावनअधिकारको सम्मान गरौं ।
धान बालीको अर्थराजनीति
नेपाल संघीय गणतन्त्रका हिसाबले युवा अवस्थातर्फ लम्कँदै गरेको देश हो । देश राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धिलाई केन्द्रभागमा राखी अगाडि बढ्दैछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् २०१८ मा १००४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विकासोन्मुख देशका रूपमा नेपाल अझै कृषिमा आधारित छ । अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी रहेको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान घट्दो छ । यसको योगदान आ.व. २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा २७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस क्षेत्रमा कुल जनसख्याको ६०.४ प्रतिशत जनतामा आश्रित रहेको छ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका बालीमध्ये तीन प्रमुख अन्नबालीको प्रभुत्व छ । धान, गहुँ र मकैले देशको कुल जीडीपीमा ३०.९२ प्रतिशतले योगदान गर्ने गरेको छ । देशको खाद्य सुरक्षाका लागि यी बालीहरू महत्वपूर्ण रहेका छन् । देश अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । किनकि देशको खाद्यान्न उत्पादनले बढ्दो माग धान्न नसकेको कुरा सम्बद्ध निकायबाटै प्रकाशित तथ्यले बताउँछ । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रहिआएबाट पुष्टि गर्छ ।
नेपाल सरकारले विगत केही दशकमा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व, नाफा–मुनाफा र व्यवसायीकरण अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण नीति र आवधिक योजनाहरू ल्याएका छन् । तीमध्ये दीर्घकालीन कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (एपीपी) महत्वपूर्ण थियो र यसले नेपाली किसानको जीवननिर्वाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि नीति– २००४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति–२००६, राष्ट्रिय बीज नीति–२०००, राष्ट्रिय मलखाद नीति–२००२ र सिँचाइ नीति–२००३ जस्ता एपीपीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि यस्ता धेरै नीति बनेका छन् । यी सबै प्रयासका बाबजुद, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरणको सीमा अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । अझै पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेकोे कुरा कृषि मन्त्रालयको स्रोत बताउँछ ।
नेपालमा कृषि र खाद्यान्न सुरक्षाका लागि केही चुनौतीहरू रहेका छन् । कृषिक्षेत्रलाई गैरकृषि प्रयोजनका लागि रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको भरपुर उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने, रासायनिक मलको सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्ने, भूखण्डीकरण रोक्ने जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । कृषिलाई नेपाली युवाहरूले अनि हाम्रो सस्कारले हेलाको पात्र बनाइयो, अझ भनौं फोहरी, खतरा र असजिलो कार्यका रूपमा हेरिदै आएको छ । राज्यका तर्फबाट यस क्षेत्रलाई त्यति जोड दिएको पाइँदैन । सरकारको लगानी कृषिक्षेत्रमा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने गरेको छ । खाद्यान्न बालीमध्ये सबैभन्दा बढी उपभोग हुने बाली धान बाली हो । वि.सं. २०४६ भन्दा पहिले धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । अहिले आएर धानबालीको उत्पादनमा ठूलो अन्तर छ, जुन अनुसन्धान केन्द्र र कृषकहरूको जमिनको बीचमा १ टन प्रतिहेक्टर छ, यद्यपि देशको अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमले उत्पादनको अन्तर कम गर्दा खाद्य सुरक्षामा सुधार आउन सक्छ । नेपाल सरकारले निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा सम्बोधन गर्न सार्वजनिक योजनामा सामेल हुने रणनीतिक योजनाका रूपमा कृषि विकास रणनीति (एडीएसस (२०१५–२०३५) ल्याएको छ । यो योजनापश्चात् कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा निजी साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । यसले कृषिमा व्यवसायीकरणको सुरुवात गर्न सहयोग पुरयाएको छ ।
एफएओका अनुसार हालका वर्षहरूमा सकारात्मक समग्र राष्ट्रिय अनाज सन्तुलनका बाबजुद धान उत्पादनको माग पूरा गर्न घरेलु उत्पादन पर्याप्त छैन । खाद्यान्न आयातको बढोत्तरीले धान उत्पादनलाई भताभुंग पारिँदैछ । खाद्यान्न आयात २००९ मा ४४ अर्ब भएकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो बढेर १ सय २७ अर्ब पुगेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबले अन्नको उत्पादन प्रवृत्ति र गतिशीलतामा त्यस्तो विश्लेषणले अन्नको उत्पादनमा कमी आएका कारण र प्रभावहरू बुझ्नका लागि सहयोगी हुन्छ । यसका साथै यसले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न र खाद्य सुरक्षा स्थिति बढाउनका लागि नीति निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ मा अनुकूल मौसमको अवस्था, सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढेको तथा बीज र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता भएका कारण कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको देखिन्छ । तर, पनि कृषि उत्पादनको जीडीपीमा योगदान क्रमशः हरेक वर्ष घटेर आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २७.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
खाद्यान्न बालीहरू खास गरी धान, मकै र गहुँ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य आधार हुन् । यी तीन बालीले नेपालमा करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कुल खेतीको क्षेत्र ओगटेको छ । धान सबैभन्दा बढी खेती हुने बाली हो । खाद्यान्न बालीहरूमध्ये धानले मात्र ३५ प्रतिशत ओगट्छ । खाद्या सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालमा कुल डाइटरिट इनर्जीमा खाद्यान्नको अंश ६९ प्रतिशत छ । यसको मतलब खाद्यान्नको उपभोग बढी रहेको अवस्था छ ।
कृषि र पशु विकास विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९९९ मा नेपालमा कुल धान उत्पादन ३७ लाख ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन उत्पादन रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा यो बढेर ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल धान खेती गरिएको भूमी भने १५ लाख १४ हजार २ सय १० बाट घटेर १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टरमा झरेको छ । यसले धान उत्पादन हुने जग्गा घट्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ नेपालका सबै जिल्लामा धानखेती समान रूपमा हँुदैन । हावापानी तथा तापक्रमले समेत धान उत्पादनमा असर पार्छ । भारतमा भएको एक अध्ययनले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमी आएको देखाएको छ । यसर्थ पनि नेपालको पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन बढेको भए तापनि तराई क्षेत्रमा घट्दै छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसले के देखाउँछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन थोरै बढेको तर तराईमा थोरै उत्पादन घट्दा पनि ठूलो संख्यामा खेती हुने भएकाले समग्रतामा धान उत्पादन घटेर जान्छ र आयातलाई प्रश्रय हुने गरेको छ ।
यसले के इंगित गर्छ भने धान फल्ने उर्वर भूमिमा बस्ती बसाल्नाले धान खेती गर्ने भूमि घट्दै छ । त्यसका अतिरिक्त युवा जनशक्ति खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेका कारण धान उत्पादन हुने जग्गाहरू बाँझो रहेकाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसका साथै कृषिलाई हेलाको पेसा बनाउने र यस पेसामा लाग्ने मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएकाले पनि धान बाली लगाउने जग्गाहरू घट्दै गएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कृषिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखेको भए पनि व्यवहारमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदान जो खेती गर्दछन् तिनलाई दिइँदैन, जो खेती गर्दैन उसैले राजनीतिक पहजका आधारमा पाउने प्रचलन अझै छ । कृषकले समयमा न त रासायनिक मल पाउँछन्, न त उन्नत बीउ पाउँछन् । माटोसुहाउँदो बीउ उत्पादन तथा अनुसन्धान नहुनाले धान बालीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने र लगाएको बालीमा फसल नलागेको दृष्टान्त प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।
भाका सराइ र लागत वृद्धिको चंगुलमा फसेको मेलम्ची
राजधानीमा बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती, हनुमन्तेजस्ता खोलानाला अत्यन्त साना भएकाले खानेपानी आपूर्तिको सम्भावना पहिलेदेखि नै थिएन । त्यसमाथि खोलानालाको सरसफाइमा ध्यान दिन नसक्दा पिउन तीन दशकअघिदेखि नै पिउनका लागि अयोग्य बनिसककेका थिए । यसैकारण राजधानीमा खानेपानी अभावको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आजभन्दा ४५ वर्ष पूर्व अर्थात् २०३० ताका विश्व बैंकको सहयोगमा गुरुयोजना तयार भएको थियो । तर, उक्त गुरुयोजना इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकी त्यत्तिकै तुहियो ।
त्यसको १० वर्षपश्चात् अर्थात् २०४१ मा राजधानीमा आवश्यक पानी उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पुनः महसुस गरियो । सोअनुरूप खानेपानी विभागले अनेकन् विकल्पहरू अध्ययन अगाडि बढायो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाको पानी राज्यमा ल्याउन सिफारिस गर्‍यो । त्यतिबेलाको अध्ययनले २ अर्ब लागतमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउन सकिने ठम्याइएको थियो । अपितु, खानेपानी विभागको त्यो पहल पनि सार्थक हुन सकेन ।
२०४५ मा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पानीको स्रोत पहिल्याउने जिम्मा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विन्नी एन्ड पाट्नर्सलाई सुम्पियो । विन्नी एन्ड पाट्नर्सले उपत्यकाभित्र र बाहिर २० वटा सतहगत स्रोतहरूको सम्भावना अध्ययन गर्‍यो । तीन वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले मेलम्चीको पानी नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको ठम्यायो । तर, विन्नी एन्ड पाट्नर्स सिफारिस पनि पहिलेको अध्ययन प्रतिवेदनझंै सिंहदरबारको घर्रामा थन्कन पुग्यो ।
२०४८ मा मेलम्ची खानेपानीको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्टलाई’ सुम्पियो । स्मेक कन्सल्टेन्टले पहिलो चरणमा २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने बतायो । वि.सं. २०३० देखि २०४८ सम्म गरिएको अध्ययनको साझा निष्कर्ष मेलम्ची खोलाको पानी नै राजाधानीका लागि आवश्यक पर्ने पानीको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने थियो ।
जहाँसम्म राजनीतिक वृत्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चियोचर्चोको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टाराई मेलम्ची खानेपानीकै कारण चर्चामा रहे । २०४८ को नयाँ बानेश्वरको चुनावी सम्बोधनमा उनको कथन थियो, ‘मलाई चुनावमा विजयी गराउनुस्, म मेलम्चीको पानीले राजधानीको सडक धोइदिन्छु ।’ मेलम्ची किसुनजीको ब्रान्डनेमजस्तै बन्न पुग्यो ।
२०५० को दशकदेखि वार्षिक बजेटमा समेत मेलम्ची खानेपानीले चर्चा हुँदै आएकोमा २०५३÷५४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउने उल्लेख गरे । २०५५ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्र्तगत मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठनपश्चात् २०५७ विश्व बैंंक र नरप्लान्टको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएकोमा २०५९ मंसिरमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान गरियो । अध्ययनले हेलम्बुको अम्वाथानमा हेडवक्र्स (मुहान) निर्माण गरी २७.५८ किलोमिटर सुरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा लार्के र यांग्री नदीमा बाँध बाँधी १७÷१७ करोड लिटर गरी कुल ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन सकिने कुरा नै सुझायो । सोही अध्ययनका आधारमा २०५८ मा एसियाली विकास बैंक १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन राजी भयो ।
विविध कारणवश २०६३ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सर्त, २०६३ मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्यो । परन्तु, राजनीतिक परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण २०६५ मा ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन पुग्यो । यसपश्चात् मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई भागमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । २०६४ मा मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना १ (पानी थथान्तरण तथा प्रशोधनसम्मको आवश्यक भौतिक कार्य) को जिम्मेवारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई र पानी प्रशोधन केन्द्रदेखि व्यक्तिगत धारा जडानसम्मको कार्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिइयो ।
सोअनुरूप वि.स. २०६४ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत हेडवक्र्स र सुरुङ निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भयो । टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन (सीसीआरसी) चयन हुन पुग्यो । सोअनुरूप वि.सं. २०७० भदौ १७ सम्ममा सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०६५ माघ २७ मा सम्झौता भयो । सीसीआरसीले १ हजार ५ सय ९० दिनसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सुरुङ र हेडवक्र्स निर्माणको कार्य ४ अर्ब २८ करोडमा निर्माण गर्ने स्वीकार गरेको थियो । सीसीआरसीले वि.सं. २०६५ चैत २२ मा सुन्दरीजल अटिबाट सुरुङ निर्माणको कार्य सुरुवात गर्‍यो ।
तर, नाजुक कार्य क्षमताका कारण वि.स.२०६८ सम्ममा उक्त अवधिमा १ हजार ३ सय ८० मिटर अडिट टनेल, २९ मिटर अम्बाथान फ्लसिङ टनेल, २९ मिटर हेड वक्र्स एक्सेस टनेल र ४ हजार ९ सय ८० मिटर मुख्य सुरुङ गरी जम्मा ६ हजार ४ सय ४४ मिटरमात्र सुरुङ निर्माण हुन सक्यो, जुन कुल हिस्साको २३ प्रतिशतमात्र थियो । साढे दुई वर्षमा एक चौथाइभन्दा कम काम गर्न सकेको सीसीआरसीले त्यतिन्जेलसम्म ७० करोड मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । बाँकी कार्य १ वर्षमा पूरा हुन नसक्नेदेखि सीसीआरसी २०६९ असोज ९ मा ठेक्का अन्त्य भयो ।
सीसीआरसीसँग ठेक्का तोकिएपश्चात् २०६९ मंसिर १६ मा हेडवक्र्स तथा बाँकी सुरुङ निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आह्वान भयो । २०६९ माघ ८ मा खोलिएको बोलपत्रमा ४ वटा बोलपत्र परेकोमा इटालीयन निर्माण कम्पनीको अपरेसन मुराटोरी सिमेन्टिस (सीएमसी) डी रे भन्ना चयन भयो । सीएमसीसँग २०७० असार ३१ मा सीएमसीसँग सम्झौता भयो । कुल ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँको सम्झौता स्वीकार गरेको सीएमसीले २०७० पुसमा निर्माण कार्य सुरु ग¥यो । सीएमसीले कार्यजिम्मा प्राप्त गरेको १ हजार ९५ दिनभित्र कार्य तमाम गर्ने सर्त स्वीकार गरेको थियो । सोअनुरूप २०७३ वैशाख २ सम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य फत्ते भइसक्नुपथ्र्यो । त्यसो त सीएमसी कार्यक्षताका हिसाबले सीसीआरसीभन्दा सीसीआरसी अब्बल थियो ।
निर्माण कार्य अगाडि बढिरहँदा २०७३ वैशाख १२ र २९ मा महाभूकम्प गयो । यो भूकम्प निर्माण कार्यका लागि सुकला गाँडमा थपला गाँड बन्न पुग्यो । भूकम्पका अतिरिक्त भारतीय नाकाबन्दी र बाढीपरिहेका कारण निर्माण सम्पन्न समय सीमा २०७४ असोज ३१ सम्म पुर्‍याइयो । तर, उक्त समय सीमाभित्र पनि आयोजना फत्ते हुन सकेन । तत्पश्चात् निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमालाई २०७४ चैत्र १२ सम्म लम्ब्याइयो । तर, उक्त समय सीमा पनि अघिल्ला समय सीमाजस्तै यत्तिकै गुज्रियो । २०७५ असार ८ मा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, एसियाली विकास बैंक, परामर्शदाता कम्पनी इजिप्सा र निर्माता कम्पनीबीच छलफल घनिभूत छलफल भयो । छलफलमा २०७५ असोज २९ (सन् २०१८ अक्टुबर १५) सम्ममा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याउने समयसीमा किटान गर्‍यो ।
२०७५ मंसिर २९ कम्पनी घाटामा गएको भन्दै बाँकी काम गर्न नसक्ने जनाउँदै सीएमसीले काम बीचमै छोड्यो । सीएमसीले बीचैमा काम छोडेपश्चात् काम ९ महिना ठप्प हुन पुग्यो । ठेकेदार कम्पनी भागेपछि २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय ग¥यो । कुल कार्यलाई १० प्याकेजमा विभाजन गरिएकोमा ८ वटा कार्य सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०७६ जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेन्डर सुुरुङ र हेडवक्र्सका लागि टेन्डर आह्वान गरेकोमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो चयन भएको छ । सोअनुरूप सिनो हाइड्रोले एक वर्ष पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताभन्दा पहिले कार्य गरे दैनिक ०.१५ प्रतिशत (१२ लाख ७५ हजार) का दरले प्रोत्साहन पुरस्कार पाउनेछ । तोकिएको समयमा पूरा नगरे सो अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
स्मरण रहोस्, २०४८ साललाई आधार वर्ष मान्ने हो भने मेलम्ची आयोजनाको ठोस चर्चा हुन थालेको २७ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । उक्त समयावधिमा १८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणपश्चात् खानेपानी मन्त्रालय गठन भएको मात्र छैन, तीन वर्षमा पाँच जना खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । यसअघि तीनवटा ठेकेदार काम फेरिसकिएको छ । अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।
त्यसो त पहिलो पटक २०४१ मा मेलम्ची आयोजनाको लागत २ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । जबकि ती ताका सडक तथा सुरुङ निर्माण गर्ने अत्याधुनिक साधनहरू नेपालमा भित्रिसकेका थिएनन् । ठेट लागत तय भने एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौताका क्रममा भयो, जहाँ २०५८ मा मेलम्चीको लागत २३.४५ अर्ब किटान गरियो । आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्दा २०६५ मा ३१.७३ अर्ब हुँदै २०७१ मा आइपुग्दा ३५.५४ अर्ब पुग्योे । अझै आयोेजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले पूरा होउन्जेलसम्म ४५ अर्ब पुग्ने बताइन्छ, जहाँ २०७५÷७६ सम्ममा २५.२० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यसरी २०७४÷७५ सम्ममा भएको समष्टिगत भौतिक प्रगति ८३.७१ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ८७.४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ, जुन सन्तोषजनकचाहिँ होइन ।
सङ्घीय संसद्को प्रतीकचिह्नमा राखियो अद्यावधिक नक्सा